Izisombululo ezisisiseko, isivumelwano esihle-iGeofumadas
Ikhaya/ezintsha/Izicwangciso eziphambili, ishishini elifanelekileyo
ezintshaGIS asiboniseMicrostation-Bentleyegeomates My
Izicwangciso eziphambili, ishishini elifanelekileyo
Kukho njalo into enokuthi izixhobo ezinkulu zeenkampani zingenzi kakuhle kakuhle, kule ncinane inokusebenzisa ithuba lokuphuhlisa izixazululo ezihlangabezana neemfuno zabathengi, ngokuqhelekileyo babenjalo.
Ukuba lishishini elilungileyo okanye akunjalo, imodeli inomdla, bahlala baya kwiinkomfa zonyaka ukukhuthaza iimveliso okanye iinkonzo zabo; Ndikhumbula ndibona kwenye yeenkomfa ze-ESRI, eSan Diego, indawo yeSketchup!, Le software yafunyanwa nguGoogle kamva. Sibonile ukuba uninzi lwezo nkampani zincinci kungekudala ziya kuthi zifunyanwe zii-emporiums ezinkulu okanye zikuthengise isisombululo esincinci esiza kuthi kwinguqulelo elandelayo sifike njengesandiso esitsha.
Iikhampani eziqhelekileyo zivumela ukuba basebenze kufuphi, ukuze bangalimazi ishishini kwaye bayazi ukuba bayabancedisa nangona isenzo esibi sivame ukuyifumana xa sisenza umngcipheko wokuchaphazela ishishini lakho okanye ukuphepha umngcipheko ohamba nokhuphiswano.
Kukho amawaka amashishini anjalo, athi ngasendleleni ahambise imali eninzi phantsi kwale modeli. Kule meko ndifuna ukubonisa omnye wale mizekelo, kuba unxibelelwano olungenazingcingo luyoyikeka kule hotele indala nasemva kokuba ixesha lemvula liqale, kubonakala ngathi ubusuku buya kuba bude kakhulu.
Le nkampani itholakala eNew Jersey, izinikezelwe kwishishini elikhethekileyo, izisombululo kulabo abenza imephu kwaye abafuni ukuphula ikhukhunathi ngokuphathwa kweetekisi.
Njengoko sisazi, ilebheli yenziwa "kwirhamncwa" uninzi lweenkqubo ze-CAD / GIS kwaye nangona ingasichaphazeli kangako emsebenzini eofisini, xa sithatha imephu eza kucofa, umzobi weemaphu wenkampani ucebisa ukuba uninzi lweetekisi ezimbi ukuphuma kakuhle kwindawo. Yintloko ebuhlungu kuba kukho iimeko ezigwenxa kangangokuba ekuphela kwendlela yokuguqula isicatshulwa sibe yimizobo.
Kwaye kanye ngaloo mzuzu ImephuText, Ngezisombululo zokubeka isicatshulwa ngaphandle kongenelelo lomntu. Yimisebenzi esisiseko enomdla enje:
Isicatshulwa esicatshulwa ngesimo
Isicatshulwa esicatshulwa kwiinestrings
Ukubhalwa kwemigca yokujikeleza
Ngoku nabo basebenzisana nezixhobo ezijoliswe kwiwebhu, nangona imveliso yabo ebizwa ngokuba yi-Label ye-EZ isebenza kunye nababoneleli-software abakhulu:
I-ArcGIS 8x kunye ne-9x
Imveliso elula kakhulu, ejoliswe kwisisiseko esisisiseko seenkampani ezivelisa iimephu zokuprinta, ezibonakala zilula kodwa zithathwa ngendlela elula.
I-Montage Corporate, Zenziwe iimveliso zabasebenzisi beMicrostation ngokusekwe kubuthathaka bayo obukhulu boku: ukushicilela. Okokugqibela uBentley uthenge isisombululo kubo kwaye ngoku uyasinika njenge-CADScript eyomeleleyo kunye neMAPPScript ngendlela yokudala ubeko lwezinto ezikumgangatho ophezulu kakhulu kunye nokusebenza okubalulekileyo kwimephu yeemephu zangaphambili (eziprintiweyo njengoko zisitsho Cadastre ye2014)
Ngoku ziyakwamkelwa nge-CAD, isisombululo sokumisela imigangatho phakathi kwe-AutoCAD kunye ne-Microstation ngokubambisana nayo Altiva Software.
AxiomintOku kunikezelwe kwizisombululo ezininzi ezifunwa ngabasebenzisi beMicrostation kwaye nangona izicelo zabo zinokudityaniswa yiBentley, kuye kwahlonitshwa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuthathelwa ingqalelo njengenkampani yeqabane (iqabane) kuba bangena kuqeqesho kwaye bavelisa incwadana ebizwa ngokuba yiMicrostation. Namhlanje. Mhlawumbi ndiza kuthetha ngabo ngenye imini kuba iimveliso zabo zininzi kwaye zixatyiswa kakhulu ngabasebenzisi beBentley, ngakumbi ngoku kuba bethatha ithuba ngefomathi ye-xml.
Benza phantse nantoni na, kufuneka nje ubone indawo yabo yobungcali ukuqinisekisa oko ndibiza ngokuba yi-Geofumados; kwimeko wenkampani uhambayo mkhuba kanye njengoko kumphathi wakhe wathi kum, babesele beza zithengiseke kwinkampani enkulu kakhulu kodwa wakwazi ukoyisa isilingo ... ngoku.
Benza izisombululo ezincinci kwiinkampani ezinkulu, nokuba ku-Outsourcing okanye phantsi kwekontrakthi eqhelekileyo; kwimeko yezisombululo ze-geospatial zibandakanya i-ESRI, iBentley kunye neManfold. Okwangoku sele benemveliso zabo, ezinje nge Umphathi weDossier endathetha kunyaka ophelileyo kwaye ngoku asebenze MapBox, umntu ufana ukusika imithambo ingajoliswanga inkqubo entsha GIS kodwa mphathi ukusetyenziswa kamasipala data zejografi usebenza ngezilingo 8x.
ArcView Bentley Systems ESRI GIS asibonise
Imali yebhanki entsha evela eMexico
Ingxaki 1: I-Acer Aspire One: i-audio ishiyiwe
Ndifuna ukubeka ibhulogi yeemifanekiso, obani ukubhala?